Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Canada dị njikere iji mejuputa amụma ịgba ọgwụ mgbochi ọhụụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Nkwupụta nke gọọmentị Canada na ndị ọrụ gọọmentị na-ahazi na ngalaba ụgbọ njem ga-enwerịrị ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 ka Ọktoba 31, 2021.
Gọọmentị Canada gbara ume ka ọ nabata ndụmọdụ ndị otu ndụmọdụ ndụmọdụ COVID-19.
Air Canada na-akwado ma na-agbasokwa usoro sayensị dabere na nchekwa ndị ahịa ya na ndị ọrụ ya.
Air Canada na -agba mbọ ka ya na ndị otu ya na Gọọmentị Canada rụọ ọrụ iji mejuputa iwu ọhụrụ a.
Air Canada taa wepụtara nkwupụta na-esote na nzaghachi gọọmentị Gọọmentị Canada na a ga-agbarịrị ndị ọrụ gọọmentị etiti na ngalaba ụgbọ njem ọgwụ mgbochi zuru oke megide COVID-19 ka Ọktoba 31, 2021.
Kemgbe mmalite oria ojoo a, Air Canada na-akwado ma na-agbasokwa usoro sayensị dabere na nchekwa ndị ahịa na ndị ọrụ ya. Nke a gụnyere ịgba ndị ọrụ ya ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi, guzobe ụlọ ọgwụ ebe ọrụ na ịkwado mmemme ịgba ọgwụ mgbochi obodo iji mee ka ịgba ọgwụ mgbochi nwee ohere.
Ọ bụ ezie na Air Canada na -echere nkọwa ndị ọzọ gbasara ọkwa taa maka ịgba ọgwụ mgbochi, ọ bụ ọkwa nnabata na usoro mgbanwe iji chekwaa ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ụgbọ elu, ndị ahịa na ndị Canada niile.
Air Canada gbara mbọ ka ya na ndị otu ya na ndị otu ya rụọ ọrụ Ọchịchị Canada imejuputa atumatu ọhụrụ a n'ụzọ dị irè na ebumnuche ịbawanye nchekwa yana ịgbasa ngwa nke usoro ahụike na nchekwa dabere na sayensị n'ụzọ kwekọrọ na nyocha COVID-19 nke gọọmentị na mkpesa ndị otu ọkachamara ọkachamara nyocha ihuenyo nke Mee 5, 2021.
Karịsịa, maka ndị njem, kọmiti ahụ tụrụ aro: ka a ghara inwe nnwale ọpụpụ tupu ndị njem ọgwụ mgbochi; na -ekweta na nnwale mgbe ọpụpụ na mbata karịrị akarị maka ndị njem a; yana nnwale ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa nke dị ugbu a nwere ike dochie ule PCR dị nwayọ ma dịkwa ọnụ karịa maka ule ọpụpụ.
Air Canada na -agbasi mbọ ike na mmepe na -aga n'ihu na itinye usoro nchekwa yana usoro dị irè ma dịkwa mma maka ndị ahịa ka ha dị. Usoro ndị a dị mkpa maka ịmalitegharị ụlọ ọrụ ụgbọ elu nke nchekwa nke, ewezuga ime ka ndị Canada nwee ike ịga njem n'efu, bụkwa ihe dị mkpa maka ọrụ akụ na ụba na Canada.